Friji Nri Mefa Factory - China Oyi kpọnwụrụ Meat Manufacturers, Suppliers
A na-ekewa nri friji n’ime nri jụrụ oyi na nri oyi. Ihe oyi dị mfe iji chekwaa ma jiri ya na mmepụta, njem na nchekwa nke nri na-emebi emebi dịka anụ, anụ ọkụkọ, ngwaahịa mmiri, mmiri ara ehi, akwa, akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi; ọ na-edozi ahụ, na-adaba adaba, na-edozi ahụ ma na-echekwa ihu ọha; Ọchị ahịa a na-achọ buru ibu, ọ na-enwe ọnọdụ dị mkpa na mba ndị mepere emepe, ọ na-etolite ngwa ngwa na mba ndị na-emepe emepe. Chilled food: ekwesighi iju oyi, obu ...
Nkwalite ngwaahịa Ngwaọrụ sitere n'ụlọ anụ na ụlọ ọrụ ndebanye aha mbupụ na China. Mbubata akụrụngwa tumadi si France, Spain, Netherlands nkọwapụta iberi na dais, eyi a eriri atụmatụ The ruru nke abụba na mkpa bụ 3: 7, abụba ma kegriiz. Tee ọwa Adabara nri nhazi, ụlọ oriri na ọ chainụ chainụ yinye na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọnọdụ nchekwa Nchekwa Cryopreservation n'okpuru -18 ℃ Encapsulated Freezing Method Usoro ihe nkiri-kpuchiri friji, CPF zutere ...
Nkwalite ngwaahịa Ngwaọrụ sitere n'ụlọ anụ na ụlọ ọrụ ndebanye aha mbupụ na China. Akụrụngwa akụrụngwa sitere na France, Spain, Netherlands, wdg nkọwapụta nkọwa ndị ọzọ, nabata atụmatụ ọdịnala Rụba abụba na mkpa bụ 3: 7, abụba mana ọ bụghị griiz. Tee ọwa Adabara nri nhazi, ụlọ oriri na ọ chainụ chainụ yinye na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Nchekwa ọnọdụ Cryopreservation n'okpuru -18 ℃ Bio-kefriza protein technology Ndu oyi kpọnwụrụ protein t ...